राजसंस्था « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
राप्रपाको माग हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था, पुस १७ गते प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पुस १७ गते काठमाडौं उपत्यकामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै उपत्यकामा प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
पश्चिम नवलपरासीमा राजावादीको प्रदर्शन
परासी, मंसिर २४ । विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गर्दै आएका राजावादीहरुले बुधबार पश्चिम नवलपरासीमा पनि प्रदर्शन गरेका छन् । हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउँदै बर्दघाटबाट निस्केको मोटरसाइकल जुलुस भूमही, सुनवल
बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक, कस्तो आउँला निर्णय ?
काठमाडौं, मंसिर २३ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न आयोजित सर्वदलीय बैठक बोलाउनु
‘जनता आऊ, राजा ल्याऊ, देश बचाऊ’ भन्ने बेला भयो’
काठमाडौं, मंसिर २२ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको सिद्धान्तको मूल संवाहक भएको बताउनुभएको छ । पार्टीको झन्डोत्तोलन तथा चुनाव चिह्न अनावरण कार्यक्रमलाई सोमबार
‘देशलाई अभिभावक आवश्यक भएकाले प्रदर्शन’
चितवन, मंसिर २२ । राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको मागसहित यही मंसिर २० गते चितवनमा भएको प्रदर्शन सफल भएको आयोजक राष्ट्रवादी चितवन समाजले जनाएको छ । सोमबार नारायणगढमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक
व्यवस्था उल्टाउने प्रयास !
काठमाडौं, मंसिर २० । पछिल्लो केही दिनयता मुलुकमा संविधनको खारेजी, धर्मसापेक्षता र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै हुने प्रदर्शनले आफ्नो आकार बढाइरहेको छ । यस्ता प्रदर्शन हरेकजसो जिल्लाहरुमा हुन थालेका छन्
झापामा जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी राजावादीको प्रदर्शन
झापा, मंसिर २० । जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी झापामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले शनिबार राजसंस्था पुनःस्थापना र संघीयता खारेजीको माग गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । २४० वर्ष लामो राजतन्त्र नेपालबाट
‘धर्म बेच्न पाइँदैन, गणतन्त्र चाहिँदैन’ भन्दै राजावादी सडकमा
काठमाडौं, मंसिर २० । काठमाडौंमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ । शनिबार ‘राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति २०७७’ को आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले राजतन्त्र पुनःस्थापना, धर्मसापेक्षता र संघीयताको खारेजीको
राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै हेटौंडामा प्रदर्शन
हेटौंडा, मंसिर १९ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मकवानपुरले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै शुक्रबार हेटौंडामा मोटरसाइकल र्‍याली गरेको छ । पार्टी कार्यालय सानोपोखराबाट निस्किएको र्‍यालीले नगरको परिक्रमा गरेको हो ।